IINKQUBO ZAMBONISO WAMBALA WEPEYINTI ZASIMAHLA - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Iinkqubo zaMboniso waMbala wepeyinti zasimahla
Iinkqubo ezibonakalayo zombala wepeyinti kwi-Intanethi zinokuba luncedo kakhulu ekufumaneni umbala ofanelekileyo wepeyinti kulo naliphi na igumbi ekhayeni lakho. Uninzi lwezixhobo ezikwi-Intanethi zilula ukuzisebenzisa kwaye zikuvumela ukuba ulayishe umfanekiso wegumbi lakho kwaye wongeze umbala wepeyinti owufunayo. Unokuzama imibala eyahlukeneyo ukubona ukuba liya kujongeka njani igumbi lakho ngaphandle kokudibana neesampulu, okanye ukuvavanya ukupeyinta inxenye yodonga. Apha ngezantsi sidwelise ezinye zeyona miboniso bhanyabhanya yepeyinti yasimahla ekhoyo ngoku.
1) ISherman-Williams Umboniso weSibonisi - USherman-Williams, omnye wabavelisi abakhulu beepeyinti kunye neebhatyi, une-Colour Snap Visualizer. Oku kukuvumela ukuba udlale kunye kwaye ukhethe imibala eqokelelweyo yeSherman-Williams.
Ngenisa ifoto yegumbi okanye ukhethe umboniso kwigalari yeefoto zegumbi. Khetha imibala ofuna ukuyisebenzisa kwiindawo ezithile zegumbi ngeendlela ezintathu: udonga lwemibala yedijithali- enayo yonke imibala yepeyinti kaSherman-Williams onokuyifuna; ingqokelela yemibala-igalari yezikimu zemibala eyahlukeneyo; okanye umsebenzi womdlalo wefoto -khetha imibala kwifoto kwaye uyitshatise nemibala yepeyinti esele ikho.
Mbini) UBenjamin Moore Umbonisi woMbala woMntu -Umbonisi woMbala woMntu ovela kuBenjamin Moore ukuvumela ukuba ubone ukuba iinkampani ziyahluka njani ngemibala yepeyinti kwindawo yakho. Ungalayisha ifoto yegumbi okanye ukhethe uyilo lwegumbi lesampulu. Kukho iisampulu zangasese, igumbi lokulala, igumbi lokutyela, indlela yamandla, iofisi yasekhaya, amagumbi abantwana, amakhitshi, amagumbi okuhlala kunye nezinto ezingaphandle. Emva koko wenza ukuya kuthi ga kwimimandla emi-5 kumfanekiso okhethiweyo ofuna ukuwpeyinta.
Khetha imibala yepeyinti ngokukhangela kwindawo yogcino lwemibala. Ukuba uyazi ukuba yeyiphi ipeyinti kaBenjamin Moore oyikhangelayo, isiseko sedatha sinokukhangelwa nokuba ligama lepeyinti okanye inombolo.
3) Isixhobo se-Behr seSmart Smart Isixhobo se-Behr's Colour Smart sigxile kwaye siqala ngezikimu zemibala. Isixhobo sikunika ukhetho lweephalethi zombala ezilungelelanisiweyo; khetha umbala ophambili kwaye emva koko inkqubo iya kukhetha kwaye ikubonise iseti yeepelethi ezinala mbala kunye neminye imibala emithathu yokudibanisa.
Imibala iboniswa yintsapho enemibala, isitayile sokuhombisa, kunye nokuthandwa. Emva kokukhetha iphalethi yakho elungelelanisiweyo, kuya kufuneka ukhethe uyilo lwegumbi kunye nomfanekiso wegumbi usebenzisa iphalethi yombala oyikhethileyo. Uyilo lwegumbi onokukhetha kulo lubandakanya amagumbi okulala, izindlu zangasese, amagumbi okuhlala, iikhikhini, amagumbi okutyela, izinto zangaphandle kunye nabanye.
4) Ipeyinti yeCloverdale yiSoftware Ipeyinti yaseCloverdale ibonelela ngesoftware enombala ekuvumela ukuba ubone ukuba iprojekthi yakho yepeyinti egqityiweyo iya kujongeka njani ngaphambi kokuba uqale ukupeyinta.
Ukuze usebenzise, ​​kufuneka uthathe ngaphambi kwefoto yegumbi oza kupeyintwa kwaye uyilayishe kwiwebhusayithi yezixhobo. Emva koko, khetha umbala kwaye ucofe indawo ofuna ukuyipeyinta kulo mbala. Kukho isixhobo sombane onokutshintsha ngaso umbala wepende owusebenzisileyo. Ungagcina kwaye wabelane kwigumbi elipeyintiweyo ngeFacebook, kuTwitter okanye nge-imeyile okanye ngokuprinta nangokukhuphela.
5) Isixhobo sombala weRodda Paint -Kwiwebhusayithi yayo, iRodda Paint ibonelela ngombala onokuthi udlale ngawo ngokudibanisa kunye nemibala eyahlukeneyo yeRodda Paint's ukukunceda uthathe isigqibo sokuba yeyiphi imibala onokufuna ukuyisebenzisa ngexesha leprojekthi yakho yepeyinti.
Isixhobo sikuvumela ukuba ukhethe kwiinkqubo zemibala emininzi kaRodda ukuze uze nephalethi yakho efanelekileyo. Ungafaka imibala yepeyinti kwaye ugqibezele ngodonga nasesilingini nakwimigangatho, kananjalo- ngokuxhomekeke kuyilo lwegumbi olukhethileyo - ezinye iindawo ezinje ngombala, iibhodi ezisezantsi, kunye nokubumba kwesithsaba. Ngaphandle kwepeyinti yepeyinti, isixhobo sikwakuvumela ukuba ufake iimveliso zemigangatho.
6) Igumbi laseGildden Isibonisi - Isixhobo seGildden's Igumbi lesibonisi likuvumela ukuba ukhethe ukuba yeyiphi imibala eqokelelweyo eya kulunga kumagumbi akho. Ungalayisha eyakho ifoto yegumbi lakho okanye ukhethe kwingqokelela yamagumbi.
Into enomdla kwesi sixhobo ikunceda ukuba ukhethe iskimu sombala okanye iphalethi yamagumbi akho. Xa usenza ukhetho lombala, le nkqubo ayizukukuxelela nje ukuba ubizwa njani umthunzi wepeyinti, iya kukunika umbala neengcebiso zomthunzi.
7) Umzobi weValspar Umzobi weValspar sisixhobo esinokukuvumela ukuba ubone indlela imibala eyahlukileyo eya kujongeka ngayo ngaphakathi nakwizithuba zangaphandle. Unokukhetha ifoto yegumbi kwilayibrari yabo yezithombe okanye ulayishe eyakho ifoto.
Iigalari zamagumbi akhoyo zahlulwe ngokohlobo lwegumbi kunye nesitayile ukuze ukwazi ukufanisa iifoto kunye nekhaya lakho. Imibala onokukhetha ukuyisebenzisa icwangciswe ziintsapho ezinemibala, ukhetha ii-swatches zombala ofuna ukuzisebenzisa kwaye uyayibona kwimifanekiso.
8) Ipeyinti yomboniso wepeyinti yeOlimpiki -Imbonakalo yepeyinti ebonakalayo yeOlimpiki ikuvumela ukuba uphonononge imibala kunye namagumbi okupeyinta ngokwamanani kunye nawo. Imibala inokukhangelwa ngokombala wosapho okanye ingqokelela yemibala equlunqwe ngumyili kunye neepelethi ezikhethiweyo.
Esi sixhobo sikunika ukhetho lokujonga kuqala imibala okhethe ukuyisebenzisa nokuba yeyiphi ifoto yegumbi oyilayishe okanye kwifoto yegumbi lesitokhwe. Isixhobo sinokuvelisa uluhlu lokuthenga kwimibala oyikhethileyo onokuyiprinta kwaye uyise kwiVenkile yokuPhucula iKhaya yaseLowe
9) Umboniso weMbonakalo yeMbala kaMcCormick -I-Visualizer yeMbala kaMcCormick ikuvumela ukuba upeyinte ifoto yangaphakathi yekhaya okanye iifoto zekhaya lakho. Zama imibala eyahlukeneyo yeMicCormick Paints kwimibala eyahlukeneyo yokudibanisa ukuze ubone ukuba igumbi lakho lingabonakala njani ngezo peyinti.
Igalari iqulethe iintlobo zoyilo lwegumbi onokulupeyinta ngokudibanisa imibala eyahlukeneyo ukuze ufumane izimvo kunye nenkuthazo. Unokupenda amagumbi okulala, indawo zokuhlala, izindlu zangasese, iipaseji kunye nezinto zangaphandle.
10) I-Pittsburgh Ipeyinta Ngokucacileyo Ipeyinta isiXhobo seGumbi -Iwebhusayithi yePittsburgh Paints inesixhobo esibizwa ngokuba yiPaint Paint Igumbi ekunceda ukhethe imibala onokufuna ukuyisebenzisa kwiprojekthi elandelayo yokuhombisa ekhaya.
Zimbini iindlela onokukhetha ngazo imibala yepeyinti, nokuba ungakhangela kwiqoqo esele ikhona okanye ungakhupha imibala kwifoto kwaye uyisebenzise kwiprojekthi yakho.
Esi sixhobo sikuvumela ukuba ufake umbala kunye nepeyinti nokuba ulayishe iifoto zesampulu okanye iifoto ezilayishiwe zegumbi lakho.
Ukufumana ezinye izimvo zokuthelekisa umbala kwi-pc okanye isixhobo esiphathwayo ndwendwela eyethu Eyona mibala yepeyinti iphepha apha. Ukuzama imibala eyahlukeneyo kuyilo lwakho ndwendwela eyethu Eyona software ingcono yoyilo lwangaphakathi iphepha.
sedona az ukuya las vegas nv
Iimpahla zasehlotyeni ezisesikweni zemitshato